Maxaa la isaga dhiga tirayaa codsiga yeeritaanka Madaxweyne Farmaajo – Madal Furan
Hoy > Warka > Maxaa la isaga dhiga tirayaa codsiga yeeritaanka Madaxweyne Farmaajo
Maxaa la isaga dhiga tirayaa codsiga yeeritaanka Madaxweyne Farmaajo
Editor September 24, 2018 Warka 0
Madal Furan – Dadka wax indha indheeya waxay qabaan in diidmadaas soo noqnoqonaysa ay ugu wacan tahay kala amar qaadasho la’aanta madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka, iyo xaaladda murugsan ee uu dalku galay, taasoo keentay jahawareer.
Dr Shaafici Shariif Maxamed oo arrimaha Soomaaliya iyo kuwa gobolkaba falanqeeya wuxuu qabaa in arrintan ay astaan u tahay in dalku galay xaalad aan waanagsanayn.
“Arrintan waxay i soo xusuusinaysaa xilligii Cabdiqaasim la soo doortay ee ay ka hor yimaadeen hogaamiye kooxeedyada. Waxaa haboonaan lahayd in, la isu tanaasulo, mararka qaarna inta aan hawada la isu marsiinin diidmo, in marka hore la wada xiriiro, ka dibna wax lagu heshiiyey lagu dhawaaqo. Haddii la sii kala taagnaadana rajada way sii xumaanaysaa” ayuu yiri Shaafici.
Shirka Maamul Goboleedka Galmudug
Ilo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa BBC u xaqiijiyey in ay socdaan wadahadallo la doonayo in Muqdisho la isugu keeno dhinacyada is khilaafsan ee maamulka Galmudug, si xal loogu helo khilaafka hogaanka maamulkaas ka dhex jira.
Khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee kala fadhiya Cadaado iyo Dhuusamareeb ayaa keenay in qolo kasta ay sheegato in madaxda dhinaca kale ay xilka ka qaadday, ayagoo qabtay guddiyo ay ku sheegeen “kuwo doorasho”, inskastoo midkoodna aysan aqoonsan beesha caalamka iyo dawladda dhexe.
Madaxweynaha Galmudug wuxuu madaxda xukuumadda federaalka ku eedeeyey inay “iyagu ka dambeeyaan dhibaatada maamulkaas ka dhex jirta”, isagoo sheegay in aysan hadda suurtogal ahayn in ay Muqdisho yimaadaan, iyagoo ku taagan go’aankii ay madaxda maamul goboleedyadu ku joojiyeen xiriirkii kala dhaxeeyey dawladda dhexe.
Dhinaca garabka Cadaado fadhiya, madaxweyne ku xigeenka Galmudug, Maxamed Xaashi Cabdi (Carrabey) ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin shirka Muqdisho, ayna halkaa u dhoofi doonaan marka uu dhinaca kale ogolaado ka qayb galka shirka.
Dr Shaafici ayaa sheegay inay habboon tahay in marka hore la xalliyo khilaafka guud ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maammul goboleedyada.
“Xaaf wuxuu ballan la soo galay golaha maamul goboleedyada ee uu hadda ka baxay madaxweynaha Hirshabeelle, marka waa in si guud loo xalliyo khilaafka oo ka dibna hoos loogu soo daadego arrinta Galmudug” ayuu yiri Shaafici.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa ayadoo uu todobaadkii hore madaxweynaha maamul-goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, sheegay in uu heshiis la gaaray dawladda federaalka, hase yeeshee hadal qoraal ah oo ay soo saareen madaxda kale ee afarta maamul goboleed ayey ku sheegeen in taasi aysan saamayn ku yeelan doonin go’aankii ay ku gaareen inay xiriirka u jaraan dawladda federaalka.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa shir dhowr maalmood uga socday magaalada Kismaayo ka dib, waxay 8 Siteembar ku sheegeen in ay xiriirka u jareen dawladda dhexe ee Federaalka. Maalmo ka dib, 14kii Siteembar, waxay soo saareen shuruudo ay ku xireen wixii wadahadal ah ee ay dawladda la yeelanayaan, kuwaasoo ay ugu weynayd in la helo “daraf 3aad oo qaata door dhexdhexaadin iyo damaanad ah”.
Madaxweyne Farmaajo oo si maqaam sare ah loogu soo dhoweeyey magaaladda Garoowe.
Magaaladda Kismaayo oo laga hirgelin doono dhismaha guryo casri ah
Hogaamiye baajiyey dagaalkii Tukaraq oo la gudoonsiin doono shahaada nabada caalamiga (Nobel Peace Price)